ခေါင်းထဲက အသိပညာ တစ်ပိုင်းတစ်စကို တတ်နိုင်သမျှ ဝေမျှဖို့ပါ။
#derivative ကို preprocessor derivative လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ Compiler က ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို Compile မလုပ်ခင်မှာ # နဲ့စတဲ့ derivative တွေကို အရင်ရှာပါတယ်။ အဲဒီ # တွေဟာ တချို့နေရာတွေမှာ အသုံးဝင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ပါ။
ကျွန်တော် မကြာခဏသုံးလေ့ရှိတဲ့ # တစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော် ပရိုဂရမ်ထဲမှာ Test Data တွေကို ထည့်သုံးချင်ရင် ရေးလေ့ရှိပါတယ်။
#warning "Remove the following line after you had finished the testing"
MyData = 123;
အဲဒီလိုရေးထားတဲ့ အတွက် Compile လုပ်တဲ့အခါမှာ warning "Remove the following line after you had finished the testing" ဆိုတဲ့ စာကြောင်းက warning အနေနဲ့ ပေါ်ပါတယ်။ Test Data ကို ပရိုဂရမ်ထဲမှာ မေ့ပြီး ချန်မထားမိအောင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သတိပေးတဲ့သဘောမျိုးပါ။
#define #if #elif #else #endif
#define ဆိုတဲ့ Keyword ကို C Programming သင်ဖူးတဲ့သူတိုင်း သိကြမှာပါ။
#define PI 3.14159 ဆိုတာမျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့ Constant ကြေငြာဖို့ သုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။
C# မှာတော့ Constant ကြေငြာဖို့အတွက် const နဲ့ readonly စတဲ့ Keyword တွေကို သုံးပြီး ကြေငြာနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့နေရာတွေမှာတော့ #define ကို သုံးဖို့လိုအပ်ပြီး #if #elif #endif စတာတွေနဲ့ တွဲသုံးလို့ရပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် ကျွန်တော့်မှာ Class3ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့။ နောက်ကျွန်တော့် ပရိုဂရမ်ကို Compile လုပ်တဲ့အခါမှာ Configuration1 အတွက် ClassA ကိုသုံးပြီး Compile လုပ်ချင်ပါတယ်။
Configuration2 အတွက်တော့ ClassB ကိုသုံးပြီး Compile လုပ်ချင်ပါတယ်။
ပုံမှန် Configuration အတွက်တော့ ClassC ကို သုံးပြီး Compile လုပ်ချင်ပါတယ်။
အဲဒီလို အချိန်မျိုးမှာ #define ကို #if #elif #else #endif နဲ့ တွဲပြီး အခုလိုသုံးလို့ရပါတယ်။
ClassA MyClass = new ClassA();
#elif Configuration 2
ClassB MyClass = new ClassB();
ClassC MyClass = new ClassC()
အဲဒီလိုရေးရင် ClassA နဲ့ Compile လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ Configuration1 အစား Configuration2 ကို define လုပ်ထားရင်တော့ ClassB နဲ့ Compile လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကို မှ define လုပ်မထားရင်တော့ ClassC နဲ့ Compile လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
#define မကြေငြာပဲ Configuration1 ကို Project Properties ထဲမှာ Command Line Argument အနေနဲ့ ထည့်လို့လည်းရပါတယ်။
နောက်တစ်ခုသုံးနိုင်တာက ပရိုဂရမ်ကို Debug လုပ်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ချို့ Function တွေကို Skip လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အခုလိုရေးပေးလို့ ရပါတယ်။
//your function code here
ပရိုဂရမ်က DEBUG လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ DEBUG ကို define လုပ်ပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် သတ်သတ်ကြေငြာပေးစရာ မလိုပါဘူး။
ပထမဥပမာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးစရာတစ်ခုရှိလာပါတယ်။ အကယ်၍ ပရိုဂရမ်မှာ တစ်ယောက်ယောက်က Configuration1 ရော Configuration2 ပါ define လုပ်သွားရင် ဘယ်နှယ့်လုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ အဲဒီ Condition ကကျွန်တော်တို့အတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ Condition မျိုးပါ။ အဲဒီလိုအခြေအနေ မှာ ပရိုဂရမ်ထဲမှာ အခုလို #error နဲ့ ရေးပြီး error message နဲ့ ပရိုဂရမ်ကို Compilation Fail ဖြစ်အောင် တားထားလို့ရပါတယ်။
#if Configuration1 && Configuration2
#error "Both Configuration1 and Configuration2 defined in the program."
ဒီအသုံးအနှုန်းတွေကိုတော့ ကုတ်ဒ်ကို ဖတ်ရလွယ်အောင်လို့ တစ်ခါတစ်လေ သုံးတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ ကျွန်တော့် ပရိုဂရမ်ထဲမှာ UI Enhancement လုပ်ထားတဲ့ Cosmetic Code တစ်ချို့ပါတယ် ဆိုပါစို့။ ကျွန်တော် အဲဒီကုတ်ဒ်တွေကို DEBUG လုပ်နေတုန်းမှာ မျက်စိရှုပ်ခံပြီး မကြည့်ချင်ရင် #region #endregion နဲ့ အခုလိုရေးထားပြီး Collapse လုပ်ပြီး ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။
#region My Cosmetic Code
//100 lines of cosmetic code here
#region #endregion ဟာ Compile လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဘာမှ မပြောင်းလဲပါဘူး။ ကုတ်ဒ်ကို ဖတ်ရလွယ်အောင်လို့ သက်သက်သုံးတာပါ။
ဒီပို့စ်လည်း MyanmarITPro မှာ တင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
Posted by ZT at 11:06 AM3comments
C# Windows Application ရဲ့ Program.cs နဲ့ပတ်သက်လို့
C# Windows Application တွေတိုင်းမှာ Program.cs ဆိုတဲ့ ဖိုင်တစ်ဖိုင် ပါပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အဲဒီဖိုင်ကို ပြင်လေ့မရှိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ Advance Features တွေအတွက် အဲဒီဖိုင်ကို ပြင်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီ ဖိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် သိထားသမျှ အချက်အလက် အချို့ကို ဝေမျှ ချင်ပါတယ်။
Startup Form ကို ပြောင်းခြင်း
Program.cs ထဲမှာ ပရိုဂရမ်စတဲ့ အချိန်မှာ Form တစ်ခု ကို စပြီး Run ဖို့ အတွက် အခုလို ရေးထားပါတယ်။
အဲဒီစာကြောင်းကို ပြောင်းရေးရင် Startup Form ဟာ ပြောင်းသွားပါတယ်။
အဲဒီလို ပြောင်းလိုက်ရင် Form1 အစား Form2 ဟာ Startup Form ဖြစ်သွားပါတယ်။
Global Exception Catch လုပ်ခြင်း
Program ရေးတဲ့အခါမှာ ရုပ်အဆိုးဆုံးက Exception တွေ ဖမ်းလို့မရပဲ လွတ်ထွက်သွားတာမျိုးပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်ပဲ သတိထားရေးရေး တစ်ခါတစ်ရံမှာ လွတ်ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဆော့ဖ်ဝဲသုံးသူကို မက်ဆေ့ဖ် ပေးပြီး LogFile ထဲမှာ ရေးထားဖို့ လိုပါတယ်။ C# မှာ Global Exception Catch လုပ်ဖို့အတွက် Program.cs ကို ပြင်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဘယ်နေရာက လွတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာကို Stack Trace နဲ့အတူ LogFile ထဲမှာ ရေးထားနိုင်ပါတယ်။
Application.Run(new Form1()); ဆိုတဲ့ Statement မတိုင်ခင်မှာ ဒီလိုရေးပေးနိုင်ပါတယ်။
ပြီးရင် Main() Function ရဲ့ အပြင်ဖက်မှာ ဒီလိုပြန်ဖမ်းလို့ရပါတယ်။
//Write your catch code here
ရေးရမှာ ပျင်းရင် AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException += ဆိုတဲ့ စာကြောင်းရိုက်ပြီးရင် Tab ၂ချက်ခေါက်လိုက်တာနဲ့ Event ရော၊ Function ပါထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
Global Variable ကြေငြာခြင်း
C# ရဲ့ Built-in feature မှာ Global Variable မပါပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Hardware နဲ့ ထိတွေ့နေရတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ အတွက်တော့ Global Variable ဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ အဲဒီတော့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုလုံးက သုံးလို့ရတဲ့ Global Variable ကိုလိုချင်ရင် Program.cs ထဲမှာ ကြေငြာပေးလို့ရပါတယ်။
static class Program ဆိုတဲ့ Declaration အပြီးမှာ အခုလိုကြေငြာလို့ရပါတယ်။
public static int MyGlobalInt = 0;
အဲဒီ Variable ကို ပရိုဂရမ်ရဲ့ ဘယ်နေရာကဖြစ်ဖြစ် Program.MyGlobalInt ဆိုပြီး ပြန်ညွှန်းလို့ရပါတယ်။
Program Instance ၂ ခု Run လို့မရအောင် တားဆီးခြင်း
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Program Instance၂ ခု Run မှာကို မလိုလားပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အရေးကြီးတဲ့ System Resource တွေကို ဝေမျှသုံးစွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခါမျိုးမှာပါ။ အဲဒီအခါမှာ Main() Function ရဲ့ အစမှာ ဒီလိုရေးပြီး တားဆီးလို့ ရပါတယ်။
System.Threading.Mutex aMutex = new System.Threading.Mutex(true, "My Software", out wasCreated);
MessageBox.Show("The program is already running.");
အဲဒီလိုရေးထားတဲ့အတွက် Computer ပေါ်မှာ Program Instanceတစ်ခု Run ပြီးသားဖြစ်နေရင် နောက်တစ်ခု ထပ် Run တဲ့အခါမှာ Error Message ပေးပြီး ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Program မှ Parameters လက်ခံခြင်း
Program မှာ Command Line Parameters လက်ခံတဲ့အခါမှာ လိုအပ်သလိုပိုပြီး ထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ့်ရဲ့ ပရိုဂရမ်ကို Mode အမျိုးမျိုးနဲ့ Run ချင်တဲ့အခါမှာ Parameters ဟာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ အဲဒါတွင်မက ၀င်းဒိုးထဲမှာ ကိုယ့် ပရိုဂရမ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ File အိုင်ကွန်ကို ကလစ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါ ပရိုဂရမ်ကို အလိုအလျောက်စပြီး ကလစ်နှိပ်လိုက်တဲ့ ဖိုင်ကို ပရိုဂရမ်ထဲမှာ သုံးချင်တဲ့အခါမှာ (ဥပမာ Microsoft Word Documentကို ကလစ်နှိပ်ပြီး Run with Microsoft Word ဆိုရင် MS Word ထဲမှာ အလိုအလျောက်ပွင့်လာသလိုမျိုး)လည်း Parameters ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ Parameters လက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ Main() Function ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို အခုလိုပြင်ပေးရပါမယ်။
အဲဒီနောက် Main() Function ထဲမှာ args ကို လိုသလိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ args.Length ဆိုရင် Parameters ဘယ်နှစ်ခု ၀င်လာသလဲဆိုတာ ပြမှာဖြစ်ပြီး args ဆိုရင် တော့ ပထမဆုံး Parameter ကို String အနေနဲ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
MyanmarITPro မှာ တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘလော့ခ်ပို့စ်တစ်ခုကို နည်းနည်း ပြန်ပြင်ပြီး တင်ထားတာပါ။
Posted by ZT at 11:02 AM0comments
Multithreading သုံးသင့် မသုံးသင့်
Multithreading ဆိုတာ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်းမင်း နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ အသုံးအနှုန်း တစ်ခုပါ။ ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို တပြိုင်နက်တည်း လမ်းကြောင်း ၂ခု ၃ခု ခွဲပြီး Run တယ်လို့ အရိုးရှင်းဆုံး အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရေးတဲ့ ပရိုဂရမ်မှာ ၁ ခုမကတဲ့ အလုပ်တွေကို တပြိုင်နက်တည်းမှာ လုပ်ချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ ပရိုဂရမ်ကို Threading သုံးပြီး ရေးလေ့ ရှိကြပါတယ်။
ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ ၁ ကနေ ၃၀၀၀ အထိ ဂဏန်းတွေကို ပရိုဂရမ်တစ်ခု ရေးပြီး ပေါင်းတယ်လို့ ဆိုကြပါစို့။ အဲဒီ ပရိုဂရမ်ကို သမာရိုးကျ နည်းနဲ့ ရေးမယ် ဆိုရင် ၁ နဲ့ ၂ ပေါင်း၊ ရလာဒ်ကို ၃ နဲ့ထပ်ပေါင်း၊ ရလာဒ်ကို ၄ နဲ့ ထပ်ပေါင်း စတာမျိုး ရေးပြီး ၁ ကနေ ၃၀၀၀ အထိ တောက်လျှောက် ပေါင်းသွားလို့ ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၁ကနေ ၃၀၀၀ အထိ ပေါင်းတာကို ရိုးရိုးတန်းတန်း မရေးဘဲ Multithreading Model အနေနဲ့ Thread ၃ ခု ခွဲရေးမယ် ဆိုရင်တော့ အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ရေးလို့ ရပါတယ်။
Thread ၃ ခု တပြိုင်နက်တည်း အလုပ်လုပ်နေပုံ
Thread တစ်ခုက ၁နဲ့ ၂ ပေါင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ နောက်ထပ် Thread တစ်ခုက ၁၀၀၁ နဲ့ ၁၀၀၂ ကို ပေါင်းနေမယ်။ နောက် Thread တစ်ခုက ၂၀၀၁ နဲ့ ၂၀၀၂ ကို ပေါင်းနေမယ် စတာမျိုး ရေးလို့ ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ပထမဆုံး Thread က ၁ကနေ ၉၉၉ အထိ ပေါင်းလို့ ရတဲ့ ရလာဒ်နဲ့ ၁၀၀၀ နဲ့ ပေါင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒုတိယနဲ့ တတိယ Thread တွေက ၁၀၀၁ ကနေ ၁၉၉၉ အထိ ပေါင်းလို့ ရတဲ့ ရလာဒ်ကို ၂၀၀၀ နဲ့ပေါင်းမယ်။ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၉၉၉ အထိ ပေါင်းလို့ ရတဲ့ ရလာဒ်ကို ၃၀၀၀ နဲ့ ပေါင်းမယ် စတာမျိုးတွေ လုပ်နေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မှ အဲဒီ ရလာဒ် သုံးခုကို ပြန်ပေါင်းရင် ၁ ကနေ ၃၀၀၀ အထိ ပေါင်းလို့ ရတဲ့ အဖြေကို ရပါလိမ့်မယ်။
ခုန မော်ဒယ်လ် ၂ ခုကို ယှဉ်ကြည့်ရင် ဒုတိယမြောက် Model က ပိုကောင်းတယ်လို့ ထင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ Model နှစ်ခုကို အချိန်မှတ်ပြီး Run ကြည့်ရင် ပထမ Model က ပိုမြန်တယ် ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ Thread နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိုဂရမ်မာ အများစု နားလည်မှု လွဲနေကြတာရဲ့ အဓိက အချက်ပါပဲ။ Threading ဆိုတာ Performance ကောင်းဖို့ အတွက် သုံးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းမှာတော့ Threading သုံးရင် ပရိုဂရမ်ရဲ့ Performance ကျသွားတတ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ Performance ကျသွားရတာလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြပါ့မယ်။ အရိုးအရှင်းဆုံး ဥပမာ အနေနဲ့ ခုန Model နှစ်ခုကို Pentium4ပရိုဆက်ဆာ တစ်ခု ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးပေါ်မှာ Run တယ်လို့ တွေးကြည့်ကြရအောင်။ ပရိုဆက်ဆာ တစ်ခုဟာ အချိန်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် Time Slice တစ်ခုမှာ အလုပ်တစ်ခုပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Thread ၃ ခု အနေနဲ့ ပရိုဆက်ဆာရဲ့ အချိန်ကို ခွဲဝေယူကြဖို့ လိုလာပါပြီ။ အဲဒီ အတွက် Thread ၃ ခု တပြိုင်နက်တည်း အလုပ်လုပ်တယ်လို့ ထင်ရအောင် ပရိုဆက်ဆာရဲ့ ပထမ Cycle မှာ ပထမ Thread က Run၊ နောက် Cycle တစ်ခုမှာ ဒုတိယ Thread က Run၊ နောက် Cycle တစ်ခုမှာ တတိယ Thread က Run၊ ပြီးရင် နောက်ထပ် Cycle တစ်ခုမှာ ပထမ Thread က ပြန် Run ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး သွားရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီလို လုပ်ဖို့အတွက် ပရိုဆက်ဆာ အနေနဲ့ Thread တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အပြောင်းအလဲ ကြားမှာ အလုပ်ပိုလုပ်ရပါတယ်။ Context Switching လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Thread တစ်ခု ကို Run ပြီး နောက်တစ်ခုကို ပြောင်းဖို့ အတွက် အခု လက်ရှိ Run နေတဲ့ Thread နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Thread ရဲ့ အခြေအနေ၊ Program Counter စတဲ့ Context လို့ခေါ်တဲ့ အချက်အလက် တွေကို အရင်ဆုံး သိမ်းဆည်းရပါတယ်။ အဲဒီလို သိမ်းပြီးတော့မှ နောက်ထပ် Run မယ့် Thread ရဲ့ အချက်အလက်တွေ ကို ခေါ်ယူရပါတယ်။ ဒီ Thread ကို Run လို့ ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် သူနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို သိမ်းဆည်းပြီး နောက် Thread ရဲ့ အချက်အလက်တွေ ကို ခေါ်ရပါတယ်။ အဲဒီလို Thread တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အပြောင်းအလဲ ကြားမှာ အလုပ် ပိုလုပ်ရတဲ့ အတွက် ပရိုဆက်ဆာမှာ အချိန် ပိုကုန်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Thread ကို သုံးတာကြောင့် ပရိုဂရမ်ရဲ့ Performance တက်မလာဘဲ ကျသွားတယ်လို့ ပြောရတာပါ။
ကျွန်တော် ခုန ဥပမာ ပြသွားခဲ့တာ Pentium4ပရိုဆက်ဆာနဲ့ ဥပမာ ပြသွားပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် Pentium4လို ပရိုဆက်ဆာ တစ်လုံးတည်း ပါတဲ့ ကွန်ပျူတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ Core i7 လို ပရိုဆက်ဆာ တစ်ခုမက ပါတဲ့ ကွန်ပျူတာ မျိုးနဲ့ Run မယ် ဆိုရင်ကော လို့ စောဒက တက်စရာ ရှိလာပါတယ်။ သီအိုရီ အရ ပရိုဆက်ဆာ တစ်ခု မကတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Thread တွေကို Run မယ်ဆိုရင် ပရိုဆက်ဆာတစ်လုံးတည်းမှာ အလုပ်မလုပ်ဘဲ ပရိုဆက်ဆာတွေ အများကြီးပေါ်မှာ ခွဲဝေပြီး အလုပ်လုပ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စဉ်းစားစရာ ရှိလာပါတယ်။ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Run နေတာ ကိုယ့်ရဲ့ ပရိုဂရမ် တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တခြား ပရိုဂရမ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အောက်က ပုံမှာ ကျွန်တော် အခု လက်ရှိ Windows7သုံးနေတဲ့ Core i5 ကွန်ပျူတာရဲ့ Task Manager ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Windows7သုံးနေသော Core i5 ပရိုဆက်ဆာ ကွန်ပျူတာ
ပုံမှာ ဝိုင်းပြထားတဲ့ နေရာကို ကြည့်မယ် ဆိုရင် အခုလက်ရှိ Thread ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် တပြိုင်နက်တည်း Run နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ့်ရဲ့ ပရိုဂရမ်က Threading သုံးမယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ပရိုဂရမ်ထဲမှာ ပါတဲ့ Thread အရေအတွက်က ပရိုဆက်ဆာရဲ့ အရေအတွက်ထက် နည်းနေမယ် ဆိုရင်တောင်မှ တခြား Run နေတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေနဲ့ ကွန်ပျူတာက ပေးနိုင်တဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ခွဲဝေသုံးစွဲ ရဦးမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သတိပြုမိဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင် Threading က မကောင်းဘူးလား မေးစရာ ရှိလာပါပြီ။ Threading ဆိုတာ Performance ကောင်းဖို့ အတွက် သုံးတယ်လို့ အမှတ်မမှားဖို့ပဲ လိုအပ်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ပရိုဂရမ်မှာ Responsiveness လိုအပ်တယ် ဆိုရင်တော့ Threading ကို မဖြစ်မနေ သုံးရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ပရိုဂရမ်ဟာ ကွန်ပျူတာထဲက လက်ရှိ အချက်အလက်တွေကို ဆာဗာထဲမှာ သွားပြီး ဖြည့်စွက်ဖို့ လိုအပ်မယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာလည်း အသုံးပြုတဲ့ User ကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်ထဲမှာ တခြားအလုပ်တွေကို ဆက်လုပ်လို့ ရနေစေချင်တယ် ဆိုတဲ့ အခါမျိုးမှာ Threading ကို သုံးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပျူတာထဲက အချက်အလက်ကို ဆာဗာမှာ သွားပြီး Update လုပ်တာကို နောက်ကွယ်ကနေ Background Thread တစ်ခု အနေနဲ့ လုပ်နေပြီး ရှေ့မှာ တခြား Thread တွေက သူ့ဘာသာသူ အလုပ်ဆက်လုပ်နေလို့ ရပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ပရိုဂရမ်က နောက်ကွယ်မှာ ဆာဗာကို အချက်အလက်တွေ Update လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အသုံးပြုတဲ့သူ အနေနဲ့ နောက်ကွယ်မှာ လုပ်နေတာတွေကို သတိမထားမိ လိုက်ဘဲ သူ့ဘာသာသူ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ဆက်သုံးလို့ ရနေပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ Parallelism ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပရိုဂရမ်ထဲက အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ တပြိုက်နက်တည်း အလုပ်လုပ်ဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်တဲ့ အချိန်မျိုးမှာ Thread ကို သုံးရပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် ပြရရင် ကျွန်တော်တို့ ရေးတဲ့ ပရိုဂရမ် တစ်ခုဟာ ကွန်ယက် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဈေးကွက် ၃-၄ ခုမှာ ရှိတဲ့ စတော့ရှယ်ယာ အချက်အလက်တွေကို တပြိုက်နက်တည်း စောင့်ကြည့်ပြီး အသုံးပြုသူကို အမြန်ဆုံး သတင်းပို့ပေးနေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင် Thread ၃ ၄ ခုကို တပြိုင်နက်တည်း Run ထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိရေးနေတဲ့ စက်ကိရိယာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလိုမျိုး ဂိမ်း ဆော့ဖ်ဝဲလိုမျိုး ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေမှာတော့ Parallelism အတွက် Threading ကို မဖြစ်မနေသုံးရပါတယ်။
ဒါကတော့ Threading သုံးသင့် မသုံးသင့် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော့် အမြင်ပါပဲ။ နိဂုံးချုပ် အနေနဲ့ ပြောရရင် ပရိုဂရမ် တိုင်းမှာ Thread သုံးတာ မကောင်းပါဘူး။ ကိုယ့် ပရိုဂရမ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ Thread ကို သုံးသင့်တဲ့ အခြေ အနေ ဖြစ်နေရင်တော့ သုံးရပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက Threading သုံးထားတဲ့ ပရိုဂရမ်ကို တော်ရုံတန်ရုံ အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့ ပရိုဂရမ်မာ တစ်ယောက် အနေနဲ့ အမှား ရှာလို့ မလွယ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်အဖွဲ့ထဲမှာ အတွေ့အကြုံနည်းတဲ့ ပရိုဂရမ်မာတွေ များနေတယ် ဆိုရင် Thread သုံးဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ နောင်ကိုလည်း အလျဉ်းသင့်ရင် သင့်သလို Thread Scheduling အကြောင်း၊ Multithreading Program ကို Debugging လုပ်တဲ့ နည်းစနစ်တွေနဲ့ တခြား Thread နဲ့ ပက်သတ်ပြီး သိသင့် သိထိုက်တဲ့ အကြောင်းတွေကို ရေးပါဦးမယ်။
Posted by ZT at 1:46 AM2comments
လုပ်ငန်းခွင်သုံးကွန်ပျူတာ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာ (Industrial Computer) ဆိုတာက ရုံးသုံးကွန်ပျူတာ အိမ်သုံးကွန်ပျူတာတွေလို မဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အကြမ်းပတမ်း အသုံးပြု နိုင်အောင် အထူးပြု တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒါတင် မကသေးပဲ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ Hardware တွေကို တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းချနေတဲ့ မားသားဘုတ် မဟုတ်တဲ့ အထူးပြု မားသားဘုတ်တွေကို တပ်ဆင် အသုံးပြုလေ့ ရှိကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာ အကြောင်း တ​စေ့တစောင်းကို လက်လှမ်းမီသလောက် ပြောပြချင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ ပုံးအခွံ (Casing) ဟာ ပုံမှန် ကွန်ပျူတာတွေလို မဟုတ်ဘဲ အကြမ်းခံနိုင်အောင် တည်ဆောက် ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ အကြမ်းခံနိုင်အောင် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ တုန်ခါမှု (Vibration)၊ လုပ်ငန်းထဲက အမှိုက်သရိုက် နဲ့ အပူဒဏ် စတာတွေ ကြောင့် ကွန်ပျူတာ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ Hardware တွေ မထိခိုက်အောင် ရည်ရွယ်တည်ဆောက် ထားတတ်ကြ ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလို လိုအပ်သလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးတာတွေ ရှိပါတယ်။ တစ်ခါက ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဟာ ပိုက်ဆံချွေတာဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာကို ဝယ်မသုံးဘဲ ရိုးရိုး ရုံးသုံး ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကို စက်မှာ တပ်ပြီး သုံးပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးရဲ့ အနိမ့်ဆုံး ဈေးဟာ စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ရိုးရိုးကွန်ပျူတာကို တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဈေးကို တဝက်လောက် လျှော့ချ လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်ဘူး ဖြစ်သွားပါတယ်။ စက်ရဲ့ တုန်ခါမှု အပူရှိန် စတာတွေကြောင့် ကွန်ပျူတာဟာ Hang သွားတာတွေ၊ အလိုအလျောက် Restart ဖြစ်သွားတာတွေ မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ပိတ်သွားပြီး ပြန်ဖွင့်လို့ မရဘဲ ဖြစ်သွားတတ်တာပါ။ ကွန်ပျူတာဟာ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ဆောက်ထားတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် စက်က ထွက်တဲ့ ဘေးထွက်ပစ္စည်း အမှုန်အမွှားတွေရဲ့ ဒဏ်ကို မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီ အမှုန်အမွှား ကျတာတွေ အပူချိန်တက်တာတွေကြောင့် ကွန်ပျူတာမှာ မကြာခဏဆိုသလို ပြသနာတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကွန်ပျူတာ ပျက်လို့ ပြန်ပေးရတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု စရိတ်ဟာ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာ မသုံးဘဲ ရိုးရိုး ကွန်ပျူတာ သုံးပြီး လျှော့ချထားတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ထက် ပိုများ သွားပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ သုံးဖို့ အတွက် ရုံးသုံး အိမ်သုံး ကွန်ပျူတာတွေကို အသုံးမပြုသင့်ဘူး ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာ တစ်ခုကိုတော့ တန်ဖိုးကြီးကြီး ပေးပြီး ရလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလိုမျိုး အကြမ်းခံနိုင်ရုံသက်သက်တွင် မကသေးပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာရဲ့ ပုံးအခွံဟာ Rack လို့ခေါ်တဲ့ စင်တွေ ပေါ်မှာ တပ်ဆင်လို့ ရအောင်၊ နံရံကပ် တပ်ဆင်လို့ ရအောင် စတဲ့ တပ်ဆင်ရေးမှာ လွယ်ကူအောင် ရည်ရွယ်တည်ဆောက် ပေးထားတတ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာတွေမှာ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ နေရာကျဉ်းကျဉ်းမှာ တပ်ဆင်လို့ ရအောင် တည်ဆောက်ထားတဲ့ Embedded PC တွေ ရှိသလို လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးပြုမယ့် အထူးပြု Hardware တွေ တပ်ဆင်လို့ ရအောင် တည်ဆောက်ထားတဲ့ အကြီးစား ကွန်ပျူတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ်အသုံးချမယ့် လုပ်ငန်းပေါ် မူတည်ပြီး Processor အမျိုးမျိုး Expansion Slot အမျိုးမျိုးကနေ ရွေးချယ်ပြီး ဝယ်လို့ ရပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာတွေမှာ သုံးတဲ့ ပရိုဆက်ဆာ တွေဟာ ပြင်ပမှာ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ ပရိုဆက်ဆာ တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် နည်းနည်း နိမ့်နေတတ်ပါတယ်။ အခုအချိန် အပြင်မှာ Core i7 လို ပရိုဆက်ဆာ မျိုးတွေ ရနေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် လုပ်ငန်းခွင် သုံး ကွန်ပျူတာတွေမှာတော့ Core2Duo၊ Core2Quad စတဲ့ ပရိုဆက်ဆာတွေကို အမြင့်ဆုံး တွေ့ရတတ် ပါတယ်။ သိပ်နာမည် မကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာ ထုတ်လုပ်သူတွေ ဆီမှာ Core i5 , Core i7 တွေ တွေ့ရတတ်ပေမယ့် နာမည်ကြီး လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာ ထုတ်လုပ်သူတွေကတော့ စိတ်တိုင်းကျအောင် စမ်းသပ်ပြီးမှ သူတို့ရဲ့ ပစ္စည်းကို ဈေးကွက် တင်ရောင်းလေ့ ရှိတဲ့အတွက် နောက်ဆုံးထုတ် ပရိုဆက်ဆာတွေကို မတွေ့ရတတ်ပါဘူး။
နောက်ထပ် ထူးခြားချက် တစ်ခုကတော့ Backplane ပါ။ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ Backplane ဟာ Hardware အများအပြား တပ်ဆင်လို့ ရအောင် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ ကွန်ပျူတာတွေမှာ ဆိုရင် Expansion Card ၇ ကတ်ဒ် ကနေ ၉ ကတ်ဒ် အထိ တပ်ဆင်လို့ ရအောင် တည်ဆောက်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူတွေ အတွက်ကတော့ မော်တာကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကတ်ဒ်တွေ၊ အာရုံခံ ကိရိယာတွေ Relay တွေနဲ့ အဆက်အသွယ် လုပ်ဖို့ ကတ်ဒ်တွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာ အမြင်အာရုံစနစ် အတွက် ကတ်ဒ်တွေ အပြင် တခြား လိုအပ်တဲ့ ကတ်ဒ်တွေပါ တပ်ဆင် ရတဲ့အတွက် အဲဒီလို Expansion Slot များတဲ့ Backplane တွေကို အသုံးပြုရလေ့ ရှိပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ မားသားဘုတ်မှာ Built-in Sound Card ပါလေ့ မရှိတာပါ။ ပုံမှန် လုပ်ငန်းခွင်သုံးဖို့ အတွက် အသံက အရေးပါတဲ့ နေရာမှာ ပါလေ့ မရှိပါဘူး။ အများစုက အသံကို မလိုအပ်တဲ့ အတွက် မားသားဘုတ်ထဲမှာ Sound Card ကို ထည့်သွင်းထားလေ့ မရှိဘဲ လိုအပ်တဲ့ အချိန်ကျမှ ကတ်ဒ်ထည့်ပြီး သုံးကြပါတယ်။
အဲဒါတင် မကသေးပါဘူး။ ပုံမှန် ကွန်ပျူတာတွေမှာ တွေ့ရလေ့ မရှိတဲ့ Feature တွေကို အချို့ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Hot-swap လို့ ခေါ်တဲ့ ကွန်ပျူတာကို ပိတ်စရာ မလိုဘဲ Hardware ကတ်ဒ်ကို ဖြုတ်လဲလို့ ရတာတွေ၊ အပူချိန်ကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် လျှော့ချပြီး ပန်ကာ မတပ်ဆင်ဘဲ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေ စတာမျိုးတွေပါ။ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို သိချင်ရင်တော့ သူတို့ကို အထူးပြု ရောင်းချနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ သွားပြီး လေ့လာ လို့ ရပါတယ်။ နောက်အချိန်ရရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အထူးပြု သုံးစွဲတဲ့ Hardware တွေ အကြောင်းကို ဆက်ပြီး ရှင်းပြ သွားပါ့မယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော် အသုံးပြုဖူးတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာ ရောင်းချသူတွေပါ။
Posted by ZT at 11:46 PM0comments
Labels: Industrial PC
ဒစ်ဂျစ်တယ် နဲ့ အင်နာလော့
အီလက်ထရွန်းနစ် အချက်ပြလှိုင်း (Electronic Signal) တွေကို အင်နာလော့ အချက်ပြလှိုင်း (Analog Signal) နဲ့ ဒီဂျစ်တယ် အချက်ပြလှိုင်း (Digital Signal) ဆိုပြီးတော့ အဓိက အားဖြင့် ၂ မျိုး ၂ စား ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ အချက်ပြလှိုင်း နှစ်မျိုး ဘယ်လို ကွာခြားတယ် ဆိုတာကို ဒီပို့စ်မှာ ရှင်းပြသွားပါ့မယ်။
ပထမဆုံး အနေနဲ့ အင်နာလော့ အချက်ပြလှိုင်း အကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ်။ အင်နာလော့ အချက်ပြလှိုင်းဆိုတာက တဆက်တည်း ဖြစ်နေတဲ့ အချက်ပြလှိုင်းကို ခေါ်တာပါ။ တဆက်တည်း ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုချင်သလဲ ဆိုရင်တော့ လှိုင်းရဲ့ တန်ဖိုးကို အမှတ်တမှတ်မှာ တိုင်းတာတဲ့ အခါမှာ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခု အနေနဲ့ အတိအကျ ဖော်ပြလို့ မရတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အပူချိန်လို ဂဏန်းမျိုးဟာ အမြဲတမ်း တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်နေပြီးတော့ ကိန်းဂဏန်းကို အတိအကျ ဖော်ပြလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အနီးစပ်ဆုံး ကိန်းဂဏန်းကို ပြောင်းလဲပြီးတော့သာ ပြောလို့ ရချင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အခု လက်ရှိအခန်းရဲ့ အပူချိန် ၂၃ ဒီဂရီ ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ရပေမယ့် တိုင်းတဲ့ သာမိုမီတာက တိကျရင် တိကျသလောက် ဒီအပူချိန်ဟာ ၂၃.၂ ဒီဂရီ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ၂၃.၂၄ ဒီဂရီ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ၂၃.၂၃၄၅၆၇ စတဲ့ တန်ဖိုး မျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး အတိအကျ မရှိပဲ ဆက်စပ်နေတဲ့ အချက်ပြလှိုင်းကို အင်နာလော့ အချက်ပြလှိုင်း လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အင်နာလော့ အချက်ပြလှိုင်းရဲ့ နောက်ထပ် ဂုဏ်သတ္တိ တစ်ခုကတော့ အချိန်တစ်ဆက်တည်း (Continuous Time) မှာ ပြောင်းလဲနေတာပါ။ အင်နာလော့ အချက်ပြလှိုင်းဟာ တန်ဖိုးတစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ပြောင်းလဲတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ဆင့်ချင်း ပြောင်းလဲမှု မရှိဘဲ တစ်ဆက်တည်း ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ Sine Wave ကို ကြည့်ပါ။ Sine Wave မှာ သူတို့ရဲ့ ဂဏန်းတွေက အချိန်နဲ့ အမျှ တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဂဏန်း တစ်ခုကနေ တစ်ခု အပြောင်းမှာ တစ်ဆင့်ချင်း ခုန်သွားတယ် ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။ အဲဒီလို ကိန်းဂဏန်းတွေ တဆက်တည်း ဖြစ်နေပြီး အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေတဲ့ (Continuous Time Continuous Value) အချက်ပြလှိုင်းကို အင်နာလော့ အချက်ပြလှိုင်း လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်ပြလှိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများစု မှားတတ်ကြတာကတော့ ဒစ်ဂျစ်တယ် လှိုင်းမှာ ၀ နဲ့ ၁ တန်ဖိုး နှစ်ခုတည်းပဲ ရှိတယ်လို့ အမှတ်မှားကြတာပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်လှိုင်းမှာ ၁ နဲ့ ၀ နှစ်ခုတည်း ရှိတဲ့ အချက်ပြလှိုင်းတွေ အများစု ရှိပေမယ့် အဆင့်ဆင့်ရှိတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်ပြလှိုင်း (Multi-Level Digital Signal) တွေမှာ ၀ နဲ့ ၁ ထက်မက တခြားတန်ဖိုးတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် လှိုင်းကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရရင် တန်ဖိုး အတိအကျ ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ အချက်ပြလှိုင်း လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ် ။ ဥပမာ ပေးရရင် လှေကားတစ်ခုမှာ လှေကားထစ် ဘယ်နှထစ် ရှိသလဲ ဆိုတာက အတိအကျ ရေတွက်လို့ ရပါတယ်။ အထစ် ၂၀ ရှိမလား ၊ အထစ် ၁၀၀ ရှိမလား၊ အထစ် ၁၀၀၀ ရှိမလား။ သူ့ဘာသာသူ ရှိချင်တဲ့ ဂဏန်း ရှိနိုင်ပေမယ့် အတိအကျ ရေတွက် လို့ ရပါတယ်။ လှေကားမှာ ၁၂၁.၅ ထစ် ရှိတယ်တို့ ၃၂.၆ ထစ် ရှိတယ်တို့ ဆိုတဲ့ တောင်မရောက် မြောက်မရောက် ကိန်းဂဏန်းတွေ မရှိနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလို ကိန်းဂဏန်း အတိအကျ ပြောလို့ ရတဲ့ အချက်ပြလှိုင်းမျိုးကိုတော့ ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်ပြလှိုင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အောက်က ပုံမှာတော့ Sine Wave ကိုပဲ ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်ပြလှိုင်းအနေနဲ့ ပြထားပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်ပြလှိုင်းရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လှိုင်းဟာ အချိန် အပိုင်းအခြားတစ်ခုမှာသာ ဂဏန်းတန်ဖိုး ပြောင်းလဲပြီး တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာလည်း တဆက်တည်း ဖြစ်မနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုမျိုး အချိန်အပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်ပြီးမှ ပြောင်းလဲတဲ့ တန်ဖိုးအတိအကျ သတ်မှတ်လို့ ရတဲ့ အချက်ပြလှိုင်းကို ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်ပြလှိုင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဒစ်ဂျစ်တယ် နဲ့ အင်နာလော့လှိုင်းတို့ရဲ့ အခြေခံကွာခြားချက်တွေပါပဲ။
Posted by ZT at 7:12 AM0comments
C# Windows Application ရဲ့ Program.cs နဲ့ပတ်သက်လို...
လုပ်ငန်းခွင်သုံးကွန်ပျူတာ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း...